Wasaaradda Caafimaadka XFS oo safiirka Shiinaha kala wareegtay qalab lagu baaro Covid-19 – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasaaradda Caafimaadka XFS oo safiirka Shiinaha kala wareegtay qalab lagu baaro Covid-19
By Ruush / March 25, 2020 March 25, 2020
Muqdisho(SONNA)--Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadad Federraalka Soomaaliya ayaa Xalay Safiirka Dowladda Shiinaha kala wareegtay qalabka lagu baaro Covid-19 iyo dharka ay xirtaan Dhaqaatiirta ka howlgala meelaha lagu hayo Bukaanada.
Qalabkan ayaa waxaa qaar ka mid ah dalalka Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya ugu deeqay Jack Ma, oo ah aas-aasaha shirkadaha Alibaba, sidoo kalena ah ninka ugu taajirsan dalka Shiinaha oo cudurkan saf-mareenka ku noqday dunida uu kolkii hore ka dilaacay.
Diyaarad sidday qalab caafimaad iyo daawooyin loogu tala-galay ka hor-tagga iyo in lagula tacaalo cudurka Covid-19 ayaa xalay ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Diyaaradaan ayaa ka timid dalka Itoobiya, waxaana garoonka ku sugayay Wasiirka Gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar), Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada, Maxamed Saciid Cabdullaahi, iyo Safiirka Soomaaliya ee dalka Itoobiya Cabdixakiim Cabdullahi Cumar Camey, kuwaas oo safiirka dowladda Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jian, kala wareegay deeqdaas.
Deeqdaan gargaarka ayaa waxaa qeyb ka ah qalabka dadka looga baaro cudurka Coronavirus iyo qalabka ay isticmaalaan dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad iyo goobaha lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka Coronavirus ee dunida ku baahay.